Colors TV App Kuwedzera Star Apk ndeimwe yeanonyanya kutarisa TV Channels mapuraneti. Iyo inonyanya kuzivikanwa muIndia nePakistan ass ndiyo yeIndia chiteshi iyo inonyanya kutepfenyura Sadio Sadium uye akawanda matarenda emitambo kana chaiwo anoonesa.
Talent inoratidzwa uye chaiyo show yeColor TV yakakurumbira kwazvo muIndia nePakistan zvimwe kunze kwekuti show yayo inotariswa uye inodikanwa munyika dzekumadokero zvakare.
Kana iwe uriwo mumwe mafani akakura eColors TV kana iwe uchida yavo Reality uye Talent anoratidza saka iwe unogona kunge unoziva nezve Colors TV App Rising Star Apk. Chaizvoizvo, iyo Android IPTV application uye inonyanya kushandiswa kuvhota muRising Star matarenda anoratidzwa nemuvara Tv.
Nezve Colors TV Kuwedzera kweApp nyeredzi
mavara TV Rising Star ndeyeTalent inoratidzwa paColor TV umo vanoimba vanoda kana vaimbi vane tarenda kubva kumativi ese India vanotora chikamu uye kuyedza rombo ravo muratidziro.
Iyo showa ine maviri kana anopfuura maviri jury mapepa anosarudzwa nevaridzi veColor TV Rising Star show kubva kune yakakurumbira uye nyanzvi kuimba kuimba Gurus kubva kuIndian Music indasitiri.
Iwe unogona zvakare kuda kuyedza iyi live TV app
Star7 rarama TV
Iyo jury panapa ine basa rekutonga uye kusarudza ivo vane tarenda zvakanyanya kana vaimbi kirimu kubva kumativi ese India.
Jury inofamba maguta anozivikanwa kwazvo emunyika mavanoronga mabvunzo ekusarudza vaimbi vane tarenda yechirongwa chikuru. Vatori vechikamu vakasarudzwa vanoenda kumakombe kutenderera kubva pavanotanga kukwikwidza.
Kunze kweiyo jury panhope vatori vechikamu vanovimba nesarudzo dzevanhuwo zvavo veIndia vanovhotera vavanofarira kutora chikamu.
Chaizvoizvo muRising Star vatongi vanoita sarudzo mushure mekutarisa mavhoti eumwe neumwe anenge achitora chikamu uye kana paine anenge apinda mukiroti akawana mavhoti mashoma saka mutongi anomubvisa pakuratidzira. Nekudaro, avo vatori vechikamu vanowana mavhoti makuru vanogona kupinda mumatanho anotevera.
zita Colors TV App Kuwedzera Nyeredzi
zera 19.91 MB
Package Zita com.viacom18.colorstv
Mashandisiro aungaita Colors TV App Rising Star (Apk)
Maitiro ekuvhota muKukhulisa Star Colors TV kana maitiro ekuvhota kune ako chandinodisisa mutori wenhabvu mune a chaizvo chinhu chakakosha kuziva nezve kuti ugadzire yako chandinodisisa mutambi anokunda iyo Colors TV Rising Star. Naizvozvo, pano ini ndichakuudza iwe kuti iwe unogona sei kuvhota kune yako chandinodisisa mutori wechikamu.
Kutanga kurodha pasi, Latest Colors TV App Rising Star Apk kubva webhusaiti yedu nekuti iyi ndeye pamutemo Android application yeColor TV Rising Star Show kuburikidza neiyo vateveri vanogona kuvhota muimbi wavo waanofarira (Mutambi).
Paunoridza iyo app yeAroid yako ibva waisa iyo uye unotanga iyo app kubva pane yako menyu app.
Mushure mekutangisa iyo app ingo shandisa iyo madhata kana makodhi emunhu waunofarira kuendesa vhoti. Rangarira kuti mushandisi mumwe chete anogona kutumira vhoti imwe chete uye haugone kutumira vhoti inodarika imwe inenge ichinyepera uye app icharamba mavhoti ako ese.
Saka kushandisa iyi App iri nyore chaizvo sezvandakataura Just Download the Apk faira reColor TV Kuwedzera kweApp Nyeredzi uye tevera iwo murayiridzo wakapihwa pachiratidzo neapp.
Kuti uvhote nenzira kwayo, iwe unofanirwa chirongwa uye kuti usakanganwe kutarisa uye kunyatsoteerera kana vatori vechikamu vachikuudza makodhi ekuvhota kana nzira yekuvhota kwavari nekuti wese anenge achitora chikamu anoteedzera nzira yekuvhota pakupera kuita kwake.
Maitiro ekuvhota muKukweza Nyeredzi (Colors TV)
Mundima iri pamusoro, ini ndakagovana maratidziro amungaita imi App uye ini ndangobata musoro wekuti maitirwo aungaita vavhoti vako vaunofarira. Nekudaro, mune iyi ndima, ini ndichakuzivisa iwe kuti kana iwe uchigona kuvhota kana yako vhoti ichaonekwa sei.
Kuitira kuvhota kune waunoda mukwikwidzi ingovhura iyo app uye kutora chikamu chekuvhota nekuti kana mukwikwidzi ari kuita, mitsetse yekuvhota yakavhurwa saka iwe unogona kuvhota panguva iyoyo chete. Saka vhoti yako inoreva zvakawanda kune ako anodiwa nyeredzi saka, tovhota chete.
Sekureva kwehunyanzvi, Rising Star show zano rakateedzerwa kubva kuIsrael Music show Hakokhaw Haba
Izvo zvine mukurumbira muIsrael nenyika dzekumadokero zvakare uko mitauro yeIsrael inotaurwa uye inonzwisiswa. Kukura Nyeredzi pane Colors TV show ane akakurumbira uye nyanzvi vatongi vakaita Shankar Mahadevan, Diljit Dosanjh (Iye anozivikanwa wechiPanish uye Hindi Singer) naMonali Thakurand.
Kana iwe uchida kuvhota nyeredzi dzako dzaunofarira muRising Star Show paColor TV wobva wadhawunirodha vhezheni yakavandudzwa ye Colors TV App Kuwedzera Star Apk uye isa iyo pane yako Android zvishandiso kubva webhusaiti yedu.
Isu tapa iyo yekuburitsa link pasi pazasi iwe kana iwe ukatenda / kudzvanya kurodha download iyo inotanga kurodha pakarepo.
Direct Download dhizaini
Categories Entertainment, Apps Tags Colors TV App Kuwedzera Nyeredzi, IPTV App Post navigation